नेपाल आज | भाँडा माझेरै डाक्टर
शुक्रबार, ०६ साउन २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (TK)
‘डाक्टर भावना, नमस्ते ।’ चप्पल, जिन्स पाइन्ट र निलो टिसर्ट लगाएर बौद्धगेटमा सिमसिमे पानीमा रुझ्दै उभिरहेकी उनलाई मैले नमस्कार गरेँ । उनले पुलुक्क हेरिन् र लगत्तै मुस्कुराउँदै नमस्कार फर्काइन ।
बौद्ध स्तुपाको नजिकै दक्षिणमा रहेको खाजाघरको तेस्रो तलामा उक्लियौँ, हामी । जोरपाटी बस्दै आएकी उनको अनुहारमा कुनै मेकअप थिएन । ‘नेचुरली ब्युटी’ थिइन, उनी । तर, दाँतलाई भने टम्म तारले बाँधेकी थिइन । ‘डेन्टिस्ट’ बनेपछि आफ्नो दाँतको आफैंले उपचार गर्नु भएको हो ?’ मैले उनलाई सोधेँ । हाँस्दै भनिन, ‘होइन नि, आफैँले त गाह्रो हुन्छ । दाँत पूरै पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण फर्किएको थियो । यसलाई मिलाएकी मात्रै,’ उनको हाँसोले कोठा थर्कियो ।
हाँस्दा उनको मुहार चम्किएको थियो । म चाहन्थेँ, उनले जीवनका तमाम गल्छेंडाहरूको कथा यसैगरी हाँसेरै सुनाउन । ‘हामी पत्रकार, खासमा दुःखमा साथ दिनभन्दा दुःखका खाटाहरूलाई कोट्याउँछौँ मात्र,’ मैले सुस्तरी भनेँ । उनी तुरुन्तै गम्भीर भइन । ‘पत्रकारिता त्यस्तै मात्रै त होइन होला है ?’ उनले हाँस्दै भनिन । हामीले अर्डर गरेको खाजा आइपुग्यो । खाँदै गफिन थाल्यौँ । बाहिर पानी दर्किरहेकै थियो । झ्यालबाट विमानस्थल छेउको डाँडा देखिन्थ्यो । बाँकी सबै सिमेन्टीको जंगल । त्यही सिमेन्टीको जंगलमा अनगिन्ती दुःख र अभावका भेलबाढी बेहोर्दै हुर्केकी थिइन, उनी । यो शहरमा दुःख के हो ? भोक कस्तो हुन्छ ? अभाव के हो ? पुस, माघको जाडो कस्तो हुन्छ ? सबै उनले पनि बेहोरेकी थिइन् ।
‘हाम्रो खास घर सिन्धुपाल्चोक ज्यामिरेमा हो रे,’ उनले आफ्ना कथाहरू भन्न शुरु गरिन् । २४ वर्षअघि उनी काठमाडौंमै जन्मिइन् । उनीपछि दुई वटी बहिनीहरू जन्मिए । बाबु ज्यामी काम गर्थे । आमा (मीना तामाङ) अरूको घरमा काम गर्थिन् । बौद्ध नयाँबस्ती क्षेत्रका कयौं घरमा उनकी आमाले भाँडा माझेकी छिन्, लुगा धोएकी छिन, भारी बोकेकी छिन । गल्ली गल्लीमा अरूको रक्सी बोकेर र्पुयाएकी छन ।
सानोमा उनी पनि कयौंपटक आमाको पछिपछि हिँडेकी छिन् । ‘एक जर्किन रक्सी र्पुयाएवापत आमाले पाँचदेखि १० रुपैयाँसम्म पाउनुहुन्थ्यो,’ उनले झ्यालतिर हेर्दै सुनाइन् । कान्छी बहिनी जन्मिएपछि घरमा कलह शुरु भयो । बुवाले रक्सी खाएर आमालाई रुवाउने गरेको दृश्य उनको आँखामा आज पनि ताजै छ । ‘झगडाको मूल कारण छोरी मात्रै जन्मिए भन्ने थियो,’ उनले ती दिन सम्झिइन् ।
समता स्कुलमा २ कक्षामा भर्ना भइन, उनी । स्कुलका सञ्चालक उत्तम सञ्जेलले उनलाई पढ्न हौसला दिए । घरको अवस्था फेरिएन । बुवाले आमालाई मानसिक र शारीरिक तनाव दिइरहन्थे । आमाको आँशु नबगेको दिनै हुन्थेन । जसले बुवाप्रति उनको मोह भंग गराउँदै गयो । बुवालाई हेर्न नपाए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थाल्यो उनलाई । तर, जति नै तनाव भए उनले पढ्न छाडिनन । आधा रातसम्म मैनबत्ती बालेर पढ्थिन, उनी । कक्षामा सधैं प्रथम नै हुन्थिन । अर्काको घरमा काम गरेर आमा राति अबेर आउन थालेपछि पढ्दा पढ्दैको किताब थाती राखेर उनी आमा खोज्न निस्किन्थिन । अरूको घर–घर बोलाउँदै हिँड्थिन । साँझ अबेरसम्म आमाले ठूल्ठूला पर्दाहरू अँध्यारोमा सकीरनसकी धोइरहेको देख्दा उनको मन दुख्थ्यो ।
छोरीलाई देख्ने बित्तिकै आमा सुक्कसुक्क रुन थाल्थिन । त्यसपछि उनी आमालाई सघाउन थाल्थिा । शहर सुनसान हुँदै गएपछि ज्याला थापेर आमाछोरी बाहिरिन्थे । कोलाहलबाट शून्यतामा डुब्दै गएको रात । सडकमा मान्छे र कुकुरले जिस्क्याउँथे, उनीहरूलाई । पैदलै घर पुग्थे । घरमा पुग्दा भोकै सुतिरहेका हुन्थे दुई बहिनी । बुवा मातेर ढोकामा पल्टिरहेका हुन्थे । आमाछोरी आएको थाहा पाउने बित्तिकै उठेर शुरु हुन्थ्यो, फेरि दुःखको अर्को अध्याय । उनीहरू विवश थिए । आमालाई बुवाले कुटेको हेरिबस्नु शिवाय अरू उपाय थिएन, उनीहरूसँग । आमाको वरिपरि जम्मा भएर सँगै रोइरहन्थे, उनीहरू । तर, जस्तै तनावको बीच पनि उनले पढ्न कहिल्यै छोडिनन ।
एकदिन उनले आमालाई आफ्नो लागि काम खोजिदिन आग्रह गरिन । तर, आमाले मानिनन । धेरै कर गरेपछि कालोपुल पारी मालीगाउँमा एउटा घरमा काम गर्न मिलाइदिइन । त्यसपछि उनी काम गर्न जान थालिन् । त्यसबेला उनी ८ कक्षामा पढ्थिन । ‘महिनाको पाँच सयमा भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, घरसफा गर्ने काम गरेँ,’ उनले गम्भीर हुँदै सुनाइन । तर, उनी पढाइ छुट्ने तनावमा थिइन । तनावकै बीच उनले तीन महिनामै काम छोडिन । काम छाडेर उनी बुवाबाट छुटकारा पाउने उपायको खोजीमा लागिन । ‘मैले आमालाई धेरै सम्झाएँ । अन्त्यमा आमा पनि तयार हुनुभयो,’ उनले जीवनको महत्वपूर्ण निर्णय गर्वका साथ सुनाइन । उनीहरूले बुवालाई छाडिदिए ।
त्यसपछि आफ्नो जीवनलाई दुःखको अर्को भंगालोमा होमिदिए, उनीहरूले । तीन बहिनी छोरी लिएर संघर्ष शुरु गर्न थालिन, उनकी आमाले । तीनै बहिनी छोरीलाई समतामा पढाउन थालिन । केही वर्षसम्म उनको बुवाले आमासँग माफी मागेजस्तो गरे । तर, नसुध्रिने देखेपछि आमाको मन फर्किएन । साता, महिना र वर्ष बित्यो । विस्तारै बुवाको आउने क्रम कम हुँदै गयो । बुवासँग टाढिएको आज ठीक १० वर्ष बितिसकेको छ । घरेलु हिंसा थोपर्ने बुवाबारे आमाछोरीले कुनै खोजखबर गर्न आवश्यक ठानेका छैनन ।
२०६५ सालमा उनले ८८.७५ प्रतिशत नम्बर ल्याएर एसएलसी पास गरिन् । त्यति नम्बर ल्याउने उनी समता स्कुलकै दोस्रो ब्याचकी पहिलो छात्रा थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उनलाई भेटेर बधाइ दिएका थिए । छात्रवृत्ति दिन धेरै कलेज आए । तर, उनी दोधारमा थिइन् । उनलाई अब काम गरेर आमाको दुःख आधा बाँड्नु थियो । सहपाठीहरू नाम चलेका कलेजमा भर्ना भइसकेका थिए । उनी भने कसरी पढ्ने भन्ने समस्यामा जेलिएकी थिइन । घरमै बसिरहिन । आमाले पढ्न हौसला दिन्थिन । अन्ततः भावना नपढ्ने सोचमा पुगिन ।
‘त्यो दिन साँझको बेला थियो । नयाँबस्तीको सानो अँध्यारो कोठामा हामी बसिरहेका थियौँ । एक्कासि हाम्रो अगाडि ढोकामा सेतो लुगा लगाएको परीजस्तै मान्छे देखा परिन । बहिनीहरू आत्तिए । म त हेरेको र्हेयै भएँ । आमा विस्तारै उठ्नुभयो,’ त्यसदिनको घटना हर्षित हुँदै सुनाउन थालिन । ती महिला कोठामै पसिन। ‘तिमी पढ्ने हो ? भनेर मलाई सोध्नुभयो’ खुशी हुँदै उनले सुनाइन । त्यसपछि भावना अक्कमक्क परिन । हर्षका आँशु पनि झरे । परी बनेर आउने महिला स्पेनिस नागरिक थिइन । भावनाले नाम भने खुलाउन चाहिनन । ‘कसैलाई नबताउन भन्नुभएको छ । उहाँ त मेरो लागि भगवान्जस्तै हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन ।
मदर टेरेसाको जस्तै लुगा लगाएर सिस्टर निर्मला फाउन्डेसन खोलेर मित्रपार्क छेउमा बसेकी महिलाहरूले दीनदुःखीको सहयोग गर्छिन् भन्ने उनकी आमाले थाहा पाएकी थिइन् । त्यही आशामा उनकी आमा त्यहाँ गएर व्यथा पोख्थिन । फर्किँदा पोल्टामा एकमुठी चामल लिएर आउँथिन । तिनै महिलाहरूले भावनालाई सहयोग गर्न स्पेनका नागरिकलाई खोजेर ल्याएका थिए ।
पढ्ने सपना पूरा हुने भएपछि भावनाको जीवनले नयाँ मोड लियो । उनी मानवीयताको सहारामा बामे सर्न थालिन् । ‘तर त्यसैबेलादेखि मैले अठोट गरेकी थिएँ । म कुनै दिन आफ्नै खुट्टामा उभिन्छु,’ उनले गर्व साथ भनिन् । त्यसपछि उनी होस्टेल बस्दै ट्रिनिटी कलेजमा विज्ञान विषय लिएर प्लस टु पढ्न थालिन् । होस्टेलमा उनी सबैकी प्यारी थिइन् । पढ्न थालेको केही महिनामा उनले एउटा अमूल्य उपहार पाइन् । त्यो थियो, ल्यापटप । ‘त्यो ल्यापटप बिग्रे पनि जिन्दगीभर कहिल्यै छाड्दिनँ,’ उनले भनिन् । आमाकै नामबाट उनले नागरिकता बनाइन ।